अलबिदा मितज्यू | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७५ असार ५, मंगलवार १०:१४ गते
पीडालाई न्यूनीकरण गर्ने असफल प्रयास गर्दै भाइ धराबासीले पाण्डुलिपिमा लेखे, ‘मान्छे नजन्मिन सक्छ तर नमर्न सक्दैन ।’ मृत्यु ः जीवनको शाश्वत सत्य । सम्पूर्ण संसार छोडेर जान्छ मान्छे अनन्तमा । कहाँ हो कहाँ ? कसले देखेको छ र ? गृहनिर्माणको तनावले म अचेल कतै पनि निस्किन भ्याएको छैन । अचानक फोन आयो– भाइ संगीत आयामको । स्तब्ध ! मेरो मन मुटु साह्रै कमजोर छ । म ज्यादै पीडा हुने ठाउँमा जान सक्दिन । चेतकान्त, चापागाईं, राजकृष्ण कँडेल, गुरूदेव र मितज्यू धर्मराज अर्यालको अन्त्येष्टिमा पनि सामेल हुन सकिन । जीवनको अन्तिम प्रहरमा हुनुहुन्थ्यो पिताश्री । म उहाँको कोठामा बिरलै जान्थे । कान्छी दिदी भगवती विंडारीको पालोमा सबै इष्टमित्र जिल्ल ः ‘किन धनराज गिरी दिदीको सामुन्ने पर्दैन ?’ यो कुरा दिदीलाई थाहा थियो । यसरी पीडा व्यवस्थापन गर्न असमर्थ छु म । सम्पूर्ण अर्याल परिवारसित क्षमा याचना गर्दछु । ‘धर्मराज एक बिचित्र प्राणी हुन् । २१ वर्षको लामो संगत हो मेरो । मलाई ‘स्तम्भकार’ बनाएको, यति ठूलो गुन लगाएको, चितवन पोष्टले हो ।
चितवन पोष्ट मेरा लागि एउटा मन्दिर हो, झुवानीलाई जनस्तरमा म सम्मान गर्दछु त्यही स्तम्भमा ‘चितवन पोष्ट’ मेरा लागि आदरणीय छ । ‘तेस्रो नेत्र’ मेरो परिचय बन्यो । शब्दातीत, कल्पनातीत उपलब्धि पायो जिन्दगीले । आज म फेरि टुहुरो भएको छु । मेरो परिवारमा हरेक, सदस्य धर्मजी सित परिचित । ‘धर्म अंकल, बाले क्याम्पसका बारेमा लेखेको कुनै पनि लेख प्रकाशित नगर्नुहोला है ।’ छोरी अनिता गिरीको अनुरोध । म ‘म जे पनि लेख्ने’ भनेर बदनाम भएको मान्छे । आफूलाई लागेको सत्य बोल्नेमात्र होइन, लेख्ने पनि । यसरी मैले आफूलाई एउटा ‘बागी’ बनाएँ, अभागी होइन । अन्यायको विरुद्धमा आवाज उठाउनु पर्दछ भनेर भित्री मनले भनेपछि परिणामको चिन्ता नहुने रहेछ । चितवनमा पत्रकारितालाई यही मौलाउने बनाउनमा धर्मराज अर्यालजीको पसिना धेरै बगेको छ । उहाँ एउटा यस्तो यात्री हुनुहुन्थ्यो, जो कहिले पनि थाक्नु भएन । एकान्तप्रेमी, अध्ययनशील र चिन्तनशील स्वभावका मेरा हेडमास्टर अब सम्झनामा मात्र सीमित ।
प्राकृतिक नियमका अगाडि मान्छे निरीह, तर यो अनन्त यात्रा अलि छिटो भएकै हो । कमसेकम असी कटोस् हरेक जिन्दगी भन्ने मेरो कामना । मलाई यतिखेर शब्दसंयोजन गर्न बहुत मुस्किल भइरहेछ । वास्तविक पीडा कति कष्टदायी हुन्छ, त्यो अनुभूत गरेको छु । रोएँ म धेरैपटक जिन्दगीमा । आज पनि यी शब्दहरु आँसुकै मसी बनाएर कागजको पानामा उतारिरहेको छु । जीवन एकदम छोटो छ । थाहा छ, फिर्ती टिकट निश्चित । शब्दयात्रामा मैले धेरै अभिभावकहरु पाएँ । वास्तविक स्नेह अनुभूत गरेँ । एकजना निष्णात् विद्वान् दाजु ‘होमर श्रेष्ठ’ सित परिचय भयो । उहाँहरुको बीचमा मेरो बारेमा कुरा भएछ । ‘धनराज गिरी सेल्फ रियलाइजेशन छ’ उहाँहरुको निचोड । हो, म आफूबाट गल्ती भएमा लाज नमानी क्षमा माग्दछु । सबैभन्दा बढी क्षमा ‘सीताजी’ सित मागेको छु । लेख्ने क्रममा त्रुटि हुनेरहेछ । भूल भएपछि, यदि जघन्य अपराध होइन भने, क्षमा दिनुपर्दछ र क्षमा माग्नु पर्दछ । ‘क्षमा’ लाई सबैभन्दा ठूलो दान मान्दछ हाम्रो महान् ग्रन्थ ‘महाभारत’ ।
यस्तो न्यानो स्नेह बर्साउने ‘दाजु’ गुमाएँ मैले पनि । दिनहरु बित्दै जानेछन् । धर्मराज अर्यालको सम्झना पनि पातलो हुँदै जानेछ । तर, उहाँका कृतिहरु अमर हुनेछन् । चितवन पोष्ट अझै जीवन्त बन्नेछ । भाइ ‘जीवराज’ म छु । अन्तिम साससम्म म चितवन पोष्टमा लेखिरहने छु । हृदयमा अमिट छाप छाडेर जानुभयो मितज्यू । मैले आजसम्म तीनजना मितहरु गुमाएँ । अब त मित पनि नलगाउने मुडमा छु । प्रिय भाइ आयाम, के सोचियो होला ? जे सोच्न पनि पाइन्छ । सोच्ने भनेको अनुमान गर्ने हो र सबै अनुमानहरु सही नहुन सक्छन् । यो दुःखद् खबर पाएपछि केही आफन्तहरुसितै टेलिफोन वार्ता भयो । रामबाबु सर, मित्र भानु उपाध्याय, एल.बी. क्षेत्री दाजु, लक्ष्मण अर्याल, श्रीकृष्ण शर्मा र गिरिराज डल्लाकोटी । भाइ बालकृष्ण थपलिया पनि सम्पर्कमा रहे । गुरूदेवद्वय नारायण खनालज्यू र विनोदीज्यूसित दुःख पोखेँ ।
हो, अर्याल परिवारसित सम्पर्क गर्ने आँट आएन । भाउजूलाई धेरै सम्झिएँ । छोराहरुलाई कति पीडा भयो होला ? ठूलो बाको छत्रछायामा हुर्किएको गोविन्दको हालत के छ होला ? अनि त्यो कुर्सी ? त्यो खाली कुर्सी एउटा आतंक नबन्ला र ? मुहार पुस्तिकाभरि उहाँको फोटो देख्दा मलाई औडाहा भयो । यतिखेर म पनि बिरामी छु, हनहनी ज्वरो आएको छ । अकल्पनीय पीडा भएमा मलाई सञ्चो हुन्न । अनि सम्झिएँ केशव भट्टराई र होम सापकोटा । चितवनले आज एउटा बत्ती गुमायो । अक्षरपेतिले आलोक नगर निर्माण गर्दछ भन्ने मेरो मान्यता ।
शब्दको संसारमा हराउने बानी परेकालाई लोभलालच हुँदैन । एउटा निर्मल मनको धनी हुनुहुन्थ्यो धर्मजी । पूरै चितवन रोएको छ, सञ्चारजगत्ले एउटा खम्बा गुमायो । बुँद राना दाजी र भाइ जीवा लामिछानेसित पनि कुरा भयो । भैरहवामा रहँदा धर्मजीले धेरैधेरै इष्टमित्रहरु कमाउनु भएको रहेछ । मेरा सारा आफन्तहरु उहाँका पनि आफन्त । यो ‘शरीर’ यो जीवन कति कमजोर छ । ६३ वर्षको उमेरमै जानु भनेको असामयिक नै हो । हामीहरु असमयमा छोडेर जानुभयो धर्मजी । अझै बाँकी थिए धेरै धेरै कविताहरु लेखिन । अझै बाँकी थिए सम्पादकीयहरु लेखिन । अलिअलि हप्काउने मान्छे नहुँदा मलाई स्वयम् लिक छाड्छु कि जस्तो लाग्छ । मैले आफूलाई सही बाटो देखाउने एउटा ‘गुरू’ गुमाएँ । ‘बा’ यो शब्द सुन्दा म झसंग हुन्छु । सबै सन्तानले अंग्रेजी साहित्य पढे । अंग्रेजी बोलिने मुलुकमा पसिना बगाइरहेका छन्, तर हाम्रो घरमा ‘बा र आमा’ नै संस्कार बनेको छ । ‘बा’ गुमाएको सन्तानहरुको पीडा म बुझ्दछु । एक्लो जीवन कति निरस हुन्छ आमालाई हेरेर अनुभूत गरेँ । भाइ जीवराज, मलाई माफ गर है ! खास लेख्न सकिन । के लेख्ने ? कसरी लेख्ने ? भगवान्को अस्तित्व हृदयले स्वीकार्दैन, कोसित फरियाद गर्ने ? दुई अवस्थामा, शायद, मान्छे लेख्न र बोल्न सक्दैन । म त्यही मनोदशाबाट गुज्रिरहेको छु । औपचारिकता मबाट सम्भव भएन । जिन्दगी नै अनौपचारिक बन्यो । भाइ आयाम, क्षमायाचना । अलबिदा मितज्यू धर्मराज अर्यालज्यू ! सम्पूर्ण परिवारमा हार्दिक समवेदना !